Iyo nyowani vhezheni yeCygwin 3.0 inosvika, iyo GNU nharaunda yeWindows | Linux Vakapindwa muropa
Cygwin muunganidzwa wematurusi yakagadzirwa naRed Hat kupa maitiro akafanana kuUnix masisitimu paMicrosoft Windows. Chinangwa chayo kutakura software inomhanya paPOSIX masisitimu kuWindows nekudzokororwa kubva kwayanobva.
Kunyangwe zvirongwa zvinotakuriswa zvichishanda pane ese mavhezheni eWindows, inozvibata zvirinani paWindows NT, Windows XP, uye Windows Server 2003.
1 Nezve Cygwin
2 Cygwin 3.0.0 Main Zvitsva Zvimiro
2.1 Kunge iyo nyowani vhezheni yeCygwin 3.0?
Panguva ino, iyo package inochengetwa kunyanya nevashandi veRed Hat. Kazhinji inogoverwa pasi pemitemo yeGPL kunze kwekuti inogona kubatanidzwa kune chero mhando yemahara software ine rezinesi iri zvinoenderana netsananguro yemahara software.
Izvo zvakare zvinoita kutenga rezinesi pamutengo kuti ugozvigovera pasi pemamwe marezinesi marudzi.
Iyo Cygwin system ine zvikamu zvakasiyana zvakasiyana:
Dynamic yekubatanidza raibhurari ("cygwin1.dll") iyo inoshandisa iyo POSIX application programming interface uchishandisa yemuno Windows API mafoni.
• Gungano rekuvandudza reGNU (iro rinosanganisira pakati pezvimwe zvinoshandiswa GCC neGDB) kufambisa mabasa ekuvandudza.
Zvikumbiro zvakaenzana nezvirongwa zvakajairika pamatanho eUNIX. Iyo kunyange ine X system (Cygwin / X) kubvira 2001.
Pamusoro pezvo, raibhurari inonzi MinGW inosanganisirwa iyo inoshanda zvakafanana kune yekuzvarwa MSVCRT raibhurari (iyo inoshandisa iyo Windows API). Raibhurari iyi ine yakaderera ndangariro mutoro uye yakaremerwa marezinesi asi haiite iyo POSIX API zvizere seCygwin.
Mushure memakore maviri ekuvandudza, Red Hat yakaburitsa yakakosha vhezheni yeCygwin 3.0.0, iyo inosanganisira DLL kutevedzera iyo yekutanga Linux API paWindows, iyo inokutendera iwe kuti ugadzire Linux zvirongwa zvine mashoma shanduko.
Iyo pasuru inosanganisirawo yakajairwa Unix zvinoshandiswa, sevhisi kunyorera, macomputer, maraibhurari, uye musoro mafaera akaunganidzwa zvakananga kumhanya paWindows.
Cygwin 3.0.0 Main Zvitsva Zvimiro
Nechibuditswa chitsva ichi Iko mukana wekugadzirisa madhairekitori muWindows nharaunda yakavhurwa, uchifunga nezve nyaya yevatambi.
Iyo mkdir kufona ikozvino inogadzira otomatiki kesi madhairekitori mukati meye dhairekitori yemuti pakaiswa Cygwin.
Iyo ficha inongowanikwa chete kubva kuburitswa kweWindows 10 1803 neiyo WSL subsystem (Windows Subsystem yeLinux).
Wakawedzera nyowani faira ioctl inonzi FS_IOC_GETFLAGS uye FS_IOC_SETFLAGS, iyo yaunogona kuseta uye kugadzirisa patsva hunhu hwefaira, shandisa mashoma mafaera ane mavoid mukati, ipa faira system chikamu encryption uye compression, zvakarongeka kutevedzera hunhu registry mutsauko mumazita edhairekitori.
MuWindows 10 1709+ nharaunda yeNTFS, iyi ndiyo semantics nyowani yePOSIX mafoni: kusunungura uye kupa zita zvakare: iyo faira rave kubviswa kana kutsiviwa neimwe, uye isina kuiswa mubhini rekudzokorora.
Kana yakavhurwa (O_TMPFILE) inodaidzwa, iyo faira ikozvino yobva yaendeswa kudoti kuti iite nzvimbo mudhairekitori revabereki.
Cygwin PIDs uye Windows PIDs zvave kupatsanurwa: Cygwin PIDs inogadzirwa sekurairwa nePOSIX, ichiwedzera kubva pa2 kusvika 65535.
Kana vachimhanya vemo maWindows maitiro, maPID avo anoratidzirwa mune huwandu hwetsika hwakakura kupfuura 65535.
Iyo forogo () kuitisa ikozvino inogona kubata nemazvo mamiriro acho nekubviswa / kutsiva kweanogoneka kana DLL panguva yebasa rayo (Windows haibvumire kubviswa kwemafaira anoshandiswa anoshandiswa.
Asi forogo () inoitwa kuburikidza nekubiridzira mune isina-kopi-pa-kunyora maitiro, sezvo isingakwanise kuitwa pamusoro peWin32 API.)
Pamusoro peizvi, iyo nyowani chattr uye lsattr zvinoshandiswa zvakawedzerwa. kumisikidza uye kutarisa hunhu hwefaira, kushandisa ioctl iri pamusoro pamutsetse wekuraira uye kutsigira mureza weLinux-yakatarwa O_PATH mu open () basa.
Kunge iyo nyowani vhezheni yeCygwin 3.0?
Kuti uwane iyi vhezheni nyowani iwe unofanirwa kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye muchikamu chayo chekurodha unogona kuwana dhawunorodha link. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeCygwin 3.0 inosvika, iyo GNU nharaunda yeWindows
Kana ini ndine vhezheni yapfuura yaiswa, ndinogona kuigadziridza?
Unoisa kupi zuva racho pane zvinyorwa zvako?